Degmada Mubaarak oo si Balaadhan Looga Xusay Munaasbada 25aad ee 20ka ginbood. - Cakaara News
Degmada Mubaarak oo si Balaadhan Looga Xusay Munaasbada 25aad ee 20ka ginbood.
Mubaarak (cakaaranews) Sabti, 28ka May, 2016, Waxaa maanta siwayn looga xusay guud ahaan deegaanka iyo dalka xuska munaasabada sanad guurada 25 jirsatay ee 20ka ginbood taasi oo maal-mihii ugu danbaysay siwayn loogu diyaar garoobayay xusitaankeeda.
Haddaba, degmada mubaarig ee gobolka Daawo ayaa maanta siwayn looga dabaal dagay xuska munaasabda 25aad ee 20ka ginbood waxaana ka soo qaybgalay munaasabadaasi masuuliyiinta maamulka degmada muwaari, iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada mubaarak.
Waxaana munaasabadaasi xuska guusha 20ka ginbood ka hadlay gudoomiyada degmada mubaarak mudane Cabdiraxmaan Maxamed Daahir (Cabdiraxman geerigo’an) oo ugu horayntii ka warbixiyay cadaadiskii iyo cabudhiskii lagu hayn jiray qoomiyadaha iyo shucuubta dalkeena itoobiya wixii ka horeeyay 20kii ginbood sanadkii 1983TI. Wuxuuna sheegay gudoomiyuhu in ay maamuladii boqortooyadii iyo tii kalidii talikii dhergigu ay ku guul darnaysteen aqoonsiga sinaanshaha qoomiyadaha iyo shucuubta dalkeena itoobiya. Waxa kale oo uu gudoomiyuhu si qoto dheer uga warbixiyay guulaha horumarineed nabadgalyo dimuqoraadiyadeed ee ay u horseeday dhamaanba qoomiyadaha iyo shucuubta itoobiya guusha 20ka ginbood ee sanadguuradii 25aad maanta siwayn looga dabaal dagayo dalkeena itoobiya gaar ahaana DDSI. Waxaa kale oo uu tilmaamay masuulku in ay tahay maali qiime iyo qadarin u leh dhamaanba shacabwaynaha itoobiya.